OTU ESI EJI AVZ - ESI MEE - 2019
Ntuziaka maka iji AVV Antivirus
Akara antiviruses nke oge a na-ejikarị arụmọrụ dị iche iche dị iche iche nke na ụfọdụ ndị nwere ajụjụ na usoro nke iji ha. Na nkuzi a, anyị ga-agwa gị gbasara atụmatụ niile nke antivirus AVZ.
Download ụdị mbipụta AVZ ọhụrụ
Ka anyị lebakwuo anya na ihe atụ dị irè nke ihe AVZ bụ. Ọrụ ọrụ ndị na-esonụ na-ebute isi ihe.
Inyocha usoro maka nje
Ọ bụla antivirus ga-enwe ike ịchọpụta malware na kọmputa na-emeso ya (disinfect ma ọ bụ ihichapụ). Dị ka ọ dị, ọrụ a dịkwa na AVZ. Ka anyị leba anya na nyocha dị otú ahụ.
Obere windo bara uru ga-apụta na ihuenyo. Na mpaghara akara na nseta ihuenyo n'okpuru, ị ga-ahụ taabụ atọ. Ha nile gbasara usoro nke ịchọta nsogbu na kọmputa ma nwee nhọrọ dị iche iche.
Na akpa taabụ "Achọ ebe" Ịkwesịrị ịlele nchekwa na nkewa nke diski ike ịchọrọ iṅomi. N'okpuru ị ga-ahụ usoro atọ nke na-enye gị ohere ịmekwu nhọrọ. Anyị na-etinye akara n'ihu ọnọdụ niile. Nke a ga-enye gị ohere ịmepụta nchọpụta ọpụrụiche pụrụ iche, nyochaa usoro ndị ọzọ na-agba ọsọ ma chọpụta ọbụna ngwanrọ dị ize ndụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị na taabụ "Ụdị Ụdị". N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ nke data ịba uru kwesịrị iṅomi.
Ọ bụrụ na ị na-eme ego nkịtị, ọ ga-ezu iji kaa ihe ahụ "Faịlụ ndị dị ize ndụ". Ọ bụrụ na nje ahụ gbanyesiri mgbọrọgwụ ike, ị ga-ahọrọ "Faịlụ niile".
AVZ, na mgbakwunye na akwụkwọ ọ bụla, na-enyocha ma nyochaa nke ọma, nke ọtụtụ ndị ọzọ antiviruses apụghị ịnya isi. Na taabụ a, a na-agbanye ma ọ bụ gbanyụọ ego a. Anyị na-akwado gị ka ịchichapụ igbe dị n'ihu igbe nchịkwa dị elu ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nsonaazụ kachasị elu.
Na mkpokọta, ị nwere taabụ nke abụọ kwesiri ịdị ka nke a.
Ọzọ, gaa mpaghara ikpeazụ. "Nhọrọ Nhọrọ".
N'elu elu, ị ga-ahụ ihe mmịfe ahụ. Anyị na-agbanwe ya kpamkpam. Nke a ga-ekwe ka ịzaghachi ihe niile enyo. Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-eme ka ịlele API na rootKit interceptors, na-achọ ndị na-achọ nchọpụta ihe na ịlele ọnọdụ ntọala SPI / LSP. Echiche zuru ezu nke taabụ ikpeazụ ị ga-enwe ihe yiri nke a.
Ugbu a ịkwesịrị ịhazigharịa omume ndị AVZ ga-ewe mgbe enwere egwu dị egwu. Iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ dee akara "Mee ọgwụgwọ" na pane nri.
N'iji ụdị iyi egwu ọ bụla, anyị na-akwado ịtọ ntọala "Hichapụ". Nanị ihe ndị ọzọ bụ egwu nke ụdị. "HackTool". N'ebe a, anyị na-adụ ọdụ ịhapụ oke "Na-emeso". Na mgbakwunye, lelee akara abụọ ahụ dị n'okpuru ndepụta egwu.
Nkeji nke abụọ ga-enye ohere iji bipụta akwụkwọ echedoghi na ebe a họpụtara. Ị nwere ike ilele ọdịnaya niile ahụ, wee wepụ ya kpamkpam. A na-eme nke a ka i wee wepu ndị na-abụghị n'ezie (ndị na-eme ọrụ, ndị na-emepụta mkpịsị ugodi, okwuntughe, na ihe ndị ọzọ) si na ndepụta nke data ahụ kpatara.
Mgbe niile setịpụrụ ntọala na nhọrọ ọchụchọ, ị nwere ike ịga n'ihu na nyocha ahụ n'onwe ya. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị. "Malite".
Usoro nkwenye ahụ ga-amalite. Aga n'ihu gosipụta ọganihu ya na mpaghara pụrụ iche. "Usoro".
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, nke dabere na ọnụọgụ data a na-enyocha, scan ga-agwụ. Ihe ndekọ ahụ ga-egosipụta ozi gbasara ịmecha ọrụ ahụ. Oge zuru ezu maka nyochaa faịlụ, yana nchịkọta usoro nyocha na egwu ndị a ga-achọpụta ga-egosi ozugbo.
Site na ịpị bọtịnụ nke a na-ahụ na onyinyo dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike ịhụ na windo dị iche iche ihe niile na-enyo enyo ma dị ize ndụ nke AVZ hụrụ n'oge nṅomi.
Ụzọ na faịlụ ọjọọ ahụ, nkọwa na ụdị ya ga-egosi ebe a. Ọ bụrụ na i tinye igbe dị na aha nke ngwanrọ dị otú ahụ, ịnwere ike ịkwaga ya na klasin ma ọ bụ hichapụ ya kpam kpam na kọmputa gị. Mgbe ịmechara ọrụ, pịa bọtịnụ ahụ "OK" na ala.
Mgbe ị na-ehichapụ kọmputa, ị nwere ike mechie windo mmemme ahụ.
Na mgbakwunye na nyocha nke usoro ihe omume, AVZ nwere ike ịrụ ụda ọrụ ndị ọzọ. Ka anyị leba anya na ndị nwere ike ịba uru nye onye ọrụ ọhaneze. Na nchịkọta nhọrọ nke usoro ihe omume n'elu, pịa na akara "Njikwa". N'ihi ya, ihe na-egosi na ọnọdụ ọ bụla nwere ike ịnweta.
N'ihe atọ nwere ike ịmalite, ịkwụsị ma kwụsịtụ iṅomi. Ndị a bụ ihe analogues nke bọtịnụ kwekọrọ na menu ihe AVZ.
Akụkụ a ga-enye ohere iji nweta ihe niile gbasara usoro gị. Nke a abughi akụkụ uzo, mana ngwaike. Ozi dị otú ahụ gụnyere ndepụta nke usoro, ụdị modulu, faịlụ usoro na ogbugba ndu. Mgbe ị pịa akara "Nnyocha Nyocha", windo dị iche ga-apụta. N'ime ya ị nwere ike igosi ihe ọmụma AVZ ga-anakọta. Mgbe ị nyochachara igbe niile dị mkpa, ị kwesịrị ịpị "Malite" na ala.
Mgbe nke a gasịrị, a ga-emeghe windo. N'ime ya, ị nwere ike ịhọrọ ebe akwụkwọ ahụ nwere ihe ọmụma zuru ezu, nakwa dee aha faịlụ ahụ n'onwe ya. Biko mara na a ga-echekwa ozi niile dị ka faịlụ HTML. Ọ na-emepe na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla. Ịkọwa ụzọ na aha maka faịlụ a zọpụta, ịkwesịrị ịpị "Chekwa".
N'ihi ya, usoro nyocha usoro usoro na ịnakọta ozi ga-amalite. N'ikpeazụ, ọrụ ahụ ga-egosipụta windo nke a ga-agwa gị ka ị hụ ozugbo ozi niile anakọtara.
N'iji usoro ọrụ a, ị nwere ike weghachite ihe ndị dị na sistemụ ahụ gaa n'ọdịdị mbụ ha ma tọgharịa ntọala dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, malware na-anwa igbochi ohere ịnweta nchịkọta akụkọ, Task Manager ma dee ụkpụrụ ya n'ime akwụkwọ ndị ọbịa. Ị nwere ike ịmeghee ihe ndị a site na iji nhọrọ ahụ "Nweghachi usoro". Iji mee nke a, pịa aha nhọrọ ahụ n'onwe ya, wee kwadoo omume ndị ọ dị mkpa ka a rụọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ghaghị ịpị "Mee nhazi arụmọrụ" na ala nke windo ahụ.
Window ga-apụta na ihuenyo nke iji kwado omume.
Mgbe oge ụfọdụ gachara, ị ga-ahụ ozi maka ịmecha ọrụ niile. Naanị windo window ahụ na ịpị bọtịnụ ahụ. "OK".
N'ime ndepụta nke paragraf abụọ nwere njikọ abụọ metụtara ịrụ ọrụ na edemede na AVZ - "Ederede Ụdị" ma "Run script".
Site na ịpị na akara "Ederede Ụdị", ị ga-emepe windo na ndepụta nke ederede dị njikere. Naanị ị ga - echekwa ndị ịchọrọ ịga ọsọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị pịa bọtịnụ ahụ na windo. Gbaa ọsọ.
N'okwu nke abụọ, ị na-agbazi editọ editọ. N'ebe a ị nwere ike ide ya n'onwe gị ma ọ bụ ibudata ya na kọmputa gị. Echefukwala ka ịpị bọtịnụ mgbe ị na-ede ma ọ bụ na-ebugharị. Gbaa ọsọ n'otu window.
Ihe a dị mkpa site na ndepụta niile. Na ịpị na akara kwesịrị ekwesị, ị ga-emepe windo nchekwa data AVZ.
Anyị anaghị akwado ịgbanwere ntọala na windo a. Hapụ ihe ọ bụla ma pịa bọtịnụ "Malite".
Mgbe obere oge gasịrị, ozi na-egosi na ihuenyo na-ekwu na emelitela nchekwa data ezuola. Naanị ị ga-emechi windo a.
Na-ele ọdịnaya nke ebe ndị ahụ na-ekpuchi ọrịa na ndị nwere nje
Site na ịpị ndị a na listi nhọrọ, ị nwere ike ịlele faịlụ niile dị ize ndụ nke AVZ hụrụ n'oge usoro nyocha nke usoro gị.
Na windo mepere emepe ọ ga-ekwe omume ihichapụ faịlụ ndị ahụ kpamkpam ma ọ bụ weghachite ha ma ọ bụrụ na ha etinyeghị egwu.
Biko mara na ka e wee tinye faịlụ enyo na nchekwa ndị a, ị ga-elele igbe elele anya na usoro nyocha usoro.
Na-echekwa ma na-ebudata ntọala AVZ
Nke a bụ nhọrọ ikpeazụ site na ndepụta a nke onye ọrụ nkịtị nwere ike ịchọrọ. Dịka aha ahụ na-egosi, ndị a na-enye gị ohere ịchekwa nhazi mbụ nke usoro antivirus (usoro ọchụchọ, usoro nṅomi, wdg) n'elu kọmputa, ma kwụghachi ya.
Mgbe ị na-echekwa, naanị mkpa ị ga-ezipụta aha faịlụ, yana nchekwa nke ịchọrọ ịchekwa ya. Mgbe ị na-ejikwa nhazi, họrọ faịlụ achọrọ na ntọala ma pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
Ọ ga-adị ka nke a bụ bọtịnụ doro anya ma mara amara. Ma, ọ bara uru ịkọwa na n'ọnọdụ ụfọdụ - mgbe a chọpụtara ngwanrọ dị ize ndụ - AVZ gbochie usoro niile nke mmechi ya, ma e wezụga maka bọtịnụ a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịnweghị ike imechi usoro ahụ na igodo ụzọ mkpirisi. "Alt F4" ma ọ bụ site na ịpị cross cross na akuku. A na-eme nke a iji gbochie nje iji kwụsị ọrụ AVZ. Ma site na ịpị bọtịnụ a, ị nwere ike mechie antivirus ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji jide n'aka.
Na mgbakwunye na nhọrọ ndị a kọwara, enwekwara nhọrọ ndị ọzọ na ndepụta ahụ, ma ọ ga-abụ na ndị ọrụ oge agaghị adị ha mkpa. Ya mere, anyị echeghị na ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka maka iji ọrụ arụghị ọrụ, dee banyere ya na nkwupụta. Anyị na-aga n'ihu.
Iji hụ ndepụta zuru oke nke ọrụ ndị AVZ nyere, ịkwesịrị ịpị akara "Ọrụ" na elu nke usoro ihe omume ahụ.
Dị ka nke ikpeazụ, anyị ga-agafe naanị ndị nke ha nwere ike ịba uru nye onye ọrụ nkịtị.
Ịpị na akara mbụ sitere na ndepụta ahụ ga-emeghe window ahụ "Njikwa Usoro". N'ime ya, ị nwere ike ịhụ ndepụta nke faịlụ niile a na-arụ ọrụ na-agba ọsọ na kọmpụta ma ọ bụ na laptọọpụ n'oge a kara aka. N'otu window ahụ, ị ​​nwere ike ịgụ nkọwa nke usoro, chọpụta onye mepụtara ya na ụzọ zuru ezu na faịlụ ahụ n'onwe ya.
I nwekwara ike mezue usoro. Iji mee nke a, họrọ usoro a chọrọ site na listi ahụ, wee pịa bọtịnụ kwekọrọ na n'ụdị obe n'ogo n'akụkụ windo.
Ọrụ a bụ ezigbo nnọchi maka ọrụ Task Manager. Ọrụ na-enweta uru pụrụ iche na ọnọdụ mgbe Njikwa Task egbochi site na nje.
Onye ọrụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala
Nke a bụ ọrụ nke abụọ na ndepụta ahụ. Na ịpị na akara na otu aha ahụ, ị ​​mepee windo maka ijikwa ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala. Ị nwere ike ịgbanwe n'etiti ha site na iji mgba ọkụ pụrụ iche.
N'otu window ahụ, nkọwa nke ọrụ ahụ n'onwe ya, ọnọdụ (na ma ọ bụ gbanyụọ), na ebe nke faịlụ ahụ a na-arụ ọrụ na-ejikọta na ihe ọ bụla.
Ị nwere ike ịhọrọ ihe dị mkpa, mgbe nke a gasịrị ị ga-enwe ike ime, gbanyụọ ma ọ bụ wepụ ọrụ / ọkwọ ụgbọala kpamkpam. Mpido ndị a dị na elu nke wọkspeesi.
Ọrụ a ga-enye gị ohere ịhazicha ntọala ntọala. Ọzọkwa, n'adịghị ka ndị ọrụ njikwa, ndepụta a gụnyere usoro usoro. Site na ịpị akara na otu aha ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ndị a.
Iji gbanyụọ ihe a họọrọ, naanị ị ga-achọ ịchọta igbe dị n'akụkụ aha ya. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ihichapụ ntinye dị mkpa. Iji mee nke a, nanị họrọ ahịrị chọrọ wee pịa bọtịnụ dị n'elu windo dịka obe obe.
Biko rịba ama na agakwaghị enwe ike weghachite njirimara ehichapụ. Ya mere, kpachara anya ka ị ghara ihichapu ihe ntinye mmalite usoro ihe dị mkpa.
Njikwa Njikwa ndị ọbịa
Anyị kwuru ntakịrị na nje virus na-ede akwụkwọ ya n'onwe ya na faịlụ ụfọdụ. "Ndị agha". Na n'ọnọdụ ụfọdụ, malware na-egbochi ịbanye na ya ka i wee ghara idozi mgbanwe ahụ. Ọrụ a ga-enyere gị aka n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ.
Na ịpị na ndepụta na akara dị na oyiyi ahụ dị n'elu, ị mepee windo njikwa. Ịnweghị ike itinye ụkpụrụ nke gị ebe a, ma ị nwere ike ihichapụ ndị dị. Iji mee nke a, họrọ akara ahụ achọrọ na bọtịnụ aka ekpe, wee pịa bọtịnụ ihichapụ, nke dị na mpaghara elu nke ebe ọrụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, obere windo ga-apụta na ịkwesịrị ikwenye ihe ahụ. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Ee".
Mgbe ehichapụ ahịrị ehichapụ, naanị ị ga-emechi windo a.
Kpachara anya ka ị ghara ihichapụ akara ndị ị na-amaghị. Ka ịdee "Ndị agha" Ọ bụghị naanị na nje nwere ike ịdebanye aha ha, ma mmemme ndị ọzọ.
Site n'enyemaka nke AVZ, ịnwekwara ike ịmepụta ụlọ ọrụ usoro kachasị ewu ewu. Ị nwere ike ịhụ ndepụta ha, ọ bụrụhaala na ị na-atụgharị òké na akara ahụ na aha kwekọrọ.
Na ịpị aha aha, ị na-agba ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịme mgbanwe na ndekọ (regedit), hazie usoro (msconfig) ma ọ bụ lelee faịlụ usoro (sfc).
Ndị a bụ ọrụ niile anyị chọrọ ịkọ. O yikarịrị ka ndị ọkachamara na Novice chọrọ njikwa usoro nchịkwa, nkwalite na ọrụ ndị ọzọ. Ọrụ dị otú ahụ dị mma maka ndị toro eto.
Enwetara atụmatụ a iji merie njehie kachasị aghụghọ nke enweghị ike iwepụ site na usoro usoro. Ọ na-etinye malware na ndepụta nke ngwanrọ egwu, nke a machibidoro ịrụ ọrụ ya. Iji mee ka atụmatụ a dị gị mkpa pịa akara "AVZGuard" na mpaghara AVZ dị elu. N'igbe igbe, pịa ihe "Kwado AVZGuard".
Jide n'aka na ị ga-emechi ngwa ngwa ndị ọzọ tupu ịme ka atụmatụ a, n'ihi na ma ọ bụghị na ha ga-esonye na listi nke ngwanrọ na-enweghị ike. N'ọdịnihu, a ga-emebi ọrụ nke ngwa ndị dị otú ahụ.
A ga-echebe usoro niile a ga-akara dị ka ndị a tụkwasịrị obi site nhichapụ ma ọ bụ mgbanwe. A ga-egbochi ọrụ nke ngwanrọ na-enweghị ọrụ. Nke a ga-enye gị ohere wepu faịlụ ndị dị ize ndụ iji wepụ ihe nyocha ọkọlọtọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-alaghachi AVZGuard. Iji mee nke a, ọzọ pịa otu akara ahụ n'elu window ihe omume ahụ, wee pịa bọtịnụ iji gbanyụọ ọrụ ahụ.
Teknụzụ nke akọwapụtara na aha ahụ ga-achọpụta ihe niile malitere, kwụsịrị ma gbanwee usoro / ọkwọ ụgbọala. Iji jiri ya, ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ahụ.
Pịa na mpio na windo AVZPM.
Na menu ndapụta, pịa na akara "Wụnye nhazi ọganihu nyochaa ọkwọ ụgbọala".
N'ime sekọnd ole na ole, a ga-etinye igbe modul dị mkpa. Ugbu a, mgbe ọ bụla emere mgbanwe ọ bụla, ị ga-enweta ọkwa. Ọ bụrụ na ịnweghịkwa nlekota nlekota dị otú ahụ, ị ​​ga-achọ ya na igbe nwube gara aga ka ịpịpị akara akara akara dị n'okpuru. Nke a ga-ebudata usoro AVZ nile ma wepụ ndị ọkwọ ụgbọala ọ dịbu.
Biko mara na bọtịnụ AVZGuard na AVZPM nwere ike ịbụ isi awọ na arụ ọrụ. Nke a pụtara na ị nwere usoro ọrụ x64 arụnyere. O di nwute, ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha adịghị arụ ọrụ na os na njiri omimi a.
Isiokwu a abatala nkwubi okwu ya. Anyị gbalịrị ịgwa gị otu esi eji atụmatụ ndị kasị ewu ewu na AVZ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla mgbe ị gụsịrị ihe mmụta a, ị nwere ike ịjụ ha na ihe a na-aza. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịṅa ntị na ajụjụ ọ bụla ma gbalịa ịza ajụjụ zuru ezu.
Top 10 kacha atụ anya 2019 PC egwuregwu
Na-emepe EXE faịlụ na gam akporo
Esi esi tinye akwụkwọ na Instagram
Esi gbanyụọ paswọọdụ mgbe ị na-ebu kọmputa na akaụntụ Microsoft na Windows 8
Ngwá ọrụ netwọk n'ozuzu ha, na ihe gbasara VKontakte karịsịa, ejiriwo ọnọdụ ha na ndụ ọtụtụ n'ime anyị. Obodo ndị a dị n'Ịntanet aghọwo ebe dị mfe maka nkwurịta okwu na mgbanwe nke ozi dị iche n'etiti ndị mmadụ. N'ebe a, ị nwere ike izipu foto, videotape, egwu, akwụkwọ na faịlụ ederede na ndị ọrụ ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe site na ọrụ nke ozi nzuzo. GụKwuo
Kedu ka esi gwuo votu VKontakte
Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet F380